Ankafizo ny zaridainanao sy ny terrasinao mandritra ny fahavaratra | Asa tanana
Ankafizo ny zaridainanao sy ny terrasinao mandritra ny fahavaratra
Asa tanana | 23/07/2021 17:24 | Nohavaozina amin'ny 23/07/2021 17:28 | Decor
Manomboka amin'ny voalohan'ny volana Jona ka hatramin'ny Oktobra (miankina amin'ny faritra ara-jeografika tsirairay avy), dia fotoana misy fotoana bebe kokoa amin'ny hazavana voajanahary sy ny mari-pana tsara. Ankoatry ny drafitra ny fotoam-pialam-boly sy fialan-tsasatra misy antsika dia tonga ny fotoana mankafy toerana hafa ao an-trano; izany hoe an'ny terraces sy zaridaina, amin'ireo izay manambina kokoa.
Raha mbola tsy manam-potoana hampifanarahana ireo faritra ao an-tranonao ireo ianao amin'ity vanim-potoana ity, dia hanoro fironana vitsivitsy amin'ny haingon-trano sy fanaka zaridaina, satria mbola manam-potoana hankafizanao ity vanim-potoana mafana ity.
Taorian'ny zava-niainantsika nandritra ny volana lasa, fanagadrana an-tery tao an-tranonay, ireo trano misy terraces sy zaridaina dia nohavaozina. Niova ny filanay, nampitombo ny anay maniry ny hijanona any ivelany kokoa.
Ireo olona manana ireo safidy ireo dia tena 'tsara vintana', satria napetrany ireo seza fisakafoanana ary mandeha mivantana hibodo ny seza zaridaina sy teres. Nefa mitandrema, tsy ampy io hanaovana io fanovana toerana io. Ireo habaka vaovao ireo dia tsy maintsy ekena, satria ny haingon-trano dia hahatonga ilay fotoana laniana amin'ny terraces sy zaridaina ho mahafinaritra kokoa.
Ny hiala sasatra no tanjona
Ny haingon-trano ao amin'ireo efitrano ireo, toy ny lafiny hafa amin'ny fiarahamonina, dia mamaly ireo lamaody miova amin'ny vanim-potoana iray hafa. Mifandimby ny tsiro sy ny loko, fa ny zava-dehibe dia izany mahazo aina ianao amin'ny manodidina anao Amin'izay fotoana izay eo amin'ny terrasinao sy ny zaridainanao. Tsy tokony harahina akaiky ny fironana, hoy izy ireo. Na izany aza, raha te hahalala momba ny lamaody amin'ity vanim-potoana ity ianao dia tsy maintsy asehontsika fa ny fanaka ety ivelany (ho an'ny terraces sy zaridaina) izay entina amin'ity vanim-potoana ity dia vita amin'ny akora simika, miaraka amin'ny kofehy voajanahary misy fanoherana lehibe. Mazava ho azy fa tsy maintsy mahazo aina izy ireo ary miankina amin'ny olona tsirairay izany.
Ny tonony mahazatra dia mijanona foana, fa amin'ity vanim-potoana ity dia misy loko lehibe kokoa tadiavina (toy ny feo mavo) mba hanomezana fifaliana bebe kokoa an'io efitrano io.
ny fanaka vita amin'ny hazo amin'ny loko maizina (toy ny mainty) dia fironana amin'ity fahavaratra ity. Izy ireo dia fifangaroan'ny fifanoherana izay malaza amin'ireo efitrano ireo, satria mampita ny hakantony sy ny hafanana izy ireo, ary tsy tokony hohadinointsika fa ny iray amin'ireo antony mandany fotoana amin'ireo toerana ireo dia ny fidirana amin'ny toetry ny fialan-tsasatra.
Farany, ny fomba ambanivohitra mahazo ny lazany ihany koa izy mandritra ireo volana fahavaratra ireo. Klasika iray hafa izay miverina. Ary farany, ary ao anatin'ny fironana manatona ny faharetana, ny fanaka sy ny seza izay namboarina miaraka amin'ny fitaovana maharitra koa dia fironana; ary ny ampahany satria afaka manao fanaka toy izany koa isika na afaka mamerina amin'ny laoniny ny sasany izay ao anaty toe-javatra somary marefo kokoa. Hahafinaritra antsika ny fotoana fanaovana asa-tanana ary avy eo, hiala sasatra amin'ny teras na zaridaina anay izahay amin'ny fahafaham-po amin'ny asa vita tsara.
Manampy antsika hanakaiky ireo torohevitra roa hafa io rehefa manamboatra loko sy zaridaina. Tsy maintsy mahazo ireo fanaka mamela antsika isika mitazona toerana fitaterana ahazoana aina; raha tsy izany dia hahatsapa ho tototra isika. Ary, etsy ankilany, tsy tokony hohadinointsika mameno ny haingonay vaovao amin'ny zavamaniry sasany, izay hanome antsika fiainana vaovao ary hamorona tontolo iainana akaiky kokoa ny fialan-tsasatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Decor » Ankafizo ny zaridainanao sy ny terrasinao mandritra ny fahavaratra
Asa tanana 7 crepe taratasy tonga lafatra ho an'ny ankizy
Kahie voaravaka volom-boaloboka amin'ny tehina